Gịnị Bụ Alaeze Chineke? Gịnị Mere Anyị Ga-eji Na-ekpe Ekpere Ka Alaeze Chineke Bịa? | Bible Na-akụzi
2 Ná mmalite nke ekpere ihe nlereanya a, Jizọs kụziiri ndị na-ege ya ntị, sị: “Ya mere, kpeenụ ekpere otú a: ‘Nna anyị nke nọ n’eluigwe, ka e doo aha gị nsọ. Ka alaeze gị bịa. Ka uche gị meekwa n’ụwa, dị ka ọ na-eme n’eluigwe.’” (Matiu 6:9-13) Gịnị ka arịrịọ atọ ndị ahụ pụtara?
12 Okwu amụma ndị na-esonụ na-akọwa ihe merenụ: “M wee nụ oké olu n’eluigwe ka ọ na-asị: ‘Nzọpụta na ike na alaeze nke Chineke anyị na ikike nke Kraịst ya aghọwo ihe weere ọnọdụ ugbu a, n’ihi na a chụdawo onye ahụ nke na-ebo ụmụnna anyị ebubo [Setan], bụ́ onye na-ebo ha ebubo ehihie na abalị n’ihu Chineke anyị!’” (Mkpughe 12:10) Ị̀ hụrụ ihe abụọ ndị dị nnọọ mkpa a kọwara n’amaokwu Bible ahụ? Nke mbụ, Alaeze Chineke nke dị n’aka Jizọs Kraịst malitere ịchị. Nke abụọ, e si n’eluigwe chụdata Setan n’ụwa.
Nchụpụ a chụpụrụ Setan na ndị mmụọ ọjọọ ya n’eluigwe kpatara ahụhụ n’ụwa. Nsogbu ndị dị otú ahụ ga-akwụsị n’oge na-adịghị anya
18 Bible nwere ọtụtụ ihe ikwu banyere agha ikpeazụ ahụ Alaeze Chineke na ọchịchị dị iche iche nke ụwa a ga-alụ. Dị ka ihe atụ, ọ na-akụzi na ka ọgwụgwụ na-eru nso, ndị ajọ mmụọ ga-agbasa ụgha iji duhie “ndị eze nke elu ụwa dum mmadụ bi.” Maka nzube dị aṅaa? “Ịchịkọta ha [ndị eze ahụ] ọnụ gaa n’agha nke oké ụbọchị nke Chineke Onye Pụrụ Ime Ihe Nile.” A ga-achịkọta ndị eze nke elu ụwa a ọnụ “n’ebe a na-akpọ Ha-Magedọn n’asụsụ Hibru.” (Mkpughe 16:14, 16) N’ihi ihe e kwuru n’amaokwu abụọ ndị ahụ, a na-akpọ agha ikpeazụ ọchịchị ụmụ mmadụ na Alaeze Chineke ga-alụ agha Ha–Magedọn, ma ọ bụ Amagedọn.
23 Ọ̀ hà aṅaa n’ogologo? Na narị afọ nke 19, ndị ji ezi obi na-amụ Bible gụkọtara oge ma kwubie na oge nchere ahụ ga-ejedebe n’afọ 1914. (Banyere afọ a, lee Ihe Odide Ntụkwasị, peeji nke 215-218.) Ihe ndị malitere ime n’ụwa n’afọ 1914 gosiri na ngụkọta oge nke ndị ahụ ji ezi obi na-amụ Bible mere ziri ezi. Mmezu nke amụma Bible na-egosi na n’afọ 1914, Kraịst ghọrọ Eze, Alaeze eluigwe nke Chineke malitekwara ịchị. N’ihi ya, anyị na-ebi n’oge ahụ “dị mkpirikpi” nke fọdụụrụ Setan. (Mkpughe 12:12; Abụ Ọma 110:2) Anyị pụkwara ikwu hoo haa na n’oge na-adịghị anya, Alaeze Chineke ga-eme ihe iji mezuo uche Chineke n’ụwa. Ị̀ hụrụ nke a dị ka akụkọ dị mma? Ì kwere na nke ahụ bụ eziokwu? Isiakwụkwọ na-esonụ ga-enyere gị aka ịhụ na Bible na-akụzi ihe ndị a n’ezie.
bh isi 8 p. 76-85